English Lessons - Saya Zin
HELLO နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသုံး ( ၅ ) မျိုး
Active English သင်တန်းသားတွေ / English ဘာသာစကား စတင်လေ့လာသူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်တာမို့ အမြင်မတော်ရင် ကျော်ဖတ်သွားကြ နော်ဗျ 🙂 ( Elementary / Pre-intermediate အဆင့် လေ့လာသူတွေ အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ ) ♦♦♦ " Hello " ကို ♦ 1. တစ်စုံတစ်ယောက် ကို မြင်တဲ့ ၊ တွေ့တဲ့အခါ...
“ GO TO SCHOOL” နဲ့ “ GO TO THE SCHOOL” ဘာကွာ ပါသလဲ ?
ဒီ နှစ်ခု ကို ဘာကွာသလဲဆိုတာ မသိရင် မှား မှားပြီး သုံးတတ်ကြတာများလို့ လိုရင်း တိုရှင်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ♦ "the" ဆိုတာ တိကျတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြန်လည်ရည်ညွှန်းရာမှာ သုံးတယ်ဆိုတာကို တော့ အရင်မှတ်ထားရမှာပါ ။ ဥပမာ > I hadasandwich for lunch. ဆိုပါတော့ ။ သူဟာ...